Gaadiid aan kala go 'lahayn oo joogsanaya wadada Bursa ee Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaGaadiidka aan kala go 'lahayn ee Istanbul Istanbul
04 / 02 / 2016 16 Bursa, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka
Gaadiid aan kala go 'lahayn oo ku socda Wadada Istanbul ee Bursa: Magaalada Bursa Metropolitan Municipal waxay isku diyaarineysaa inay isku xirto Kent Square - Terminal iyadoo la raacayo nidaamka tareenka, dhanka kalena gacanta lagu duubto gacmaha isgoyska loo sameeyo Beşyol si aysan u carqaladeynin taraamka iyo taraafikada labadaba. Iyada oo qayb ka ah mashruuca wejiga qandaraaska, Buundada wadada '30 mitir' waxay kuxirantahay Küçükbalıklı Deriska marxaladda koowaad, iyo markii la dhammeystiro wareegtooyinka, isgoysyada isgoyska ayaa la sameyn doonaa.
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Mayor Recep Altepe, oo ah hal tareenka nidaamka hal dhinac ah isla markaana isbadalka magaalooyinka ayaa gebi ahaanba isbadali doona wajiga Avenue ee Istanbul, mashruucu wuxuu gabi ahaanba noqon doonaa isku socod aan hakad laheyn iyadoo ujeedada laga leeyahay ay tahay in la kala gooyo isgoyska shanta waddo ayaa sheegay in dhibaato muhiim ah laga ciribtiri doono. Iyadoo la raacayo hadafkeedii ahaa inay ku duubto Bursa shabaqeeda birta, Dawladda Hoose ee Magaalada, oo billowday Dhismaha Wadnaha Magaalada - Terminal T9.4 khadka tareenka ee xNUMX-kiloomitir dhererkiisu yahay 11, wuxuu dardar geliyay buundada iyo isgoysyada isgoyska wadada si aysan u carqaladeyn gaadiidka tareenka. Mashruuca isgoyska ee loo qorsheeyay Beşyol, isgoyska Çelebi Mehmet Boulevard iyo İstanbul Avenue, wuxuu marayaa marxaladda koowaad halka Çebibi Mehmet Boulevard uu ku xirnaan doono Küçükbalüçüklı Neighborhood. Küçükbalıklı, Çiftehavuzlar, Altınova iyo xaafadaha Fatih waxay ku wada xiran yihiin jaranjarada.
Gaadiidka aan xadka lahayn.
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Recep Altepe, nidaamka tareenka, isbadalka magaalooyinka, buundada iyo isgoyska wejiga Istanbul Street gabi ahaanba ayaa isbadali doona, ayuu yiri. Duqa magaalada Altepe wuxuu cadeeyay in Çelebi Mehmet Bulvarı, oo loo yaqaan wadada '30 mitir' kaas oo ku kici doona mitirka 40 ee dhaqan ahaan, loo dhisi doono si loogu xiro bariga wadada İstanbul, Alt Si looga hortago in carqaladeynta nidaamka tareenka uu shaqeeyo, waxaan u diyaarinay mashruuc isgoys ah gobolka Beşyol. Marxaladda koowaad, sii wadidda Çelebi Mehmet Boulevard waxaa lagu hubin doonaa buundada aan dhisi doonno, halka howlaha nidaamka tareenka ay sii socon doonaan iyadoo aan kala go 'lahayn. Waqtigan xaadirka ah, wax dhibaato ah maleh in loo rogo wadooyinka dhinaceeda buundada. Kadib, markii la dhammeystiray wareegtooyinka, qeybaha isgoyska ayaa la dhameystiri doonaa. Horayba faa'iido ugu laha Bursa, ”ayuu yidhi.
Gaadiidka aan kala go 'lahayn ee ka jira magaalada Bursa ee 2020
Nidaamka xawaareynta ee Barta Ataturk Street waa caadi
Istanbul Street to the necklace, gaadiidka aan kala go 'lahayn ee taraamka
Ceelkii Mehmet Boulevard
Wareegga Wareegtada - Jidka tareenka T2
Wareegga Wareegga Magaalada
Metro waxay bedeli doontaa wajiga Sancaktepe